कांग्रेसद्वारा माओवादी, जसपा र माधव-झलनाथसँग गठबन्धन प्रयास : RajdhaniDaily.com
HomeBreaking Newsकांग्रेसद्वारा माओवादी, जसपा र माधव-झलनाथसँग गठबन्धन प्रयास
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभामा दोस्रो ठूलो दलको भूमिकामा रहेको नेपाली कांग्रेसले सरकार गठनका लागि आफू तयार रहेको सन्देशसहित सक्रियता बढाएको छ ।
बूढानीलकण्ठस्थित सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा मंगलबार बसेको कांग्रेस पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी बैठकले ‘विपक्षमा रहेका सबै शक्तिबीच गठबन्धन बनाएर सरकारको नेतृत्वमा अघि बढ्ने’ निर्णय गरेको छ । यसका लागि माओवादी, जसपा र नेकपा एमालेका माधव नेपाल तथा झलनाथ खनाल समूहसँग गठबन्धन प्रयास गर्ने निर्णय भएको छ ।
कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद्मा विश्वासको मत लिन ‘असफल’ भएपछि कांग्रेसले आफू नेतृत्वमा सरकार गठन पहल थालेको र विपक्षमा रहेका सबै शक्ति एक ठाउँ ल्याउने कोशिस भइरहेको छ ।
‘सबै विपक्षी एक ठाउँ ल्याउने र सरकार गठन गर्ने प्रयास भइरहेको छ,’ कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशसरण महतले भने, ‘कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र एमालेभित्रको माधव–झलनाथ समूहसँग पनि गठबन्धन प्रयास गर्ने बैठकको निर्णय हो, सबैसँग छलफल हुन्छ ।’
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिएको समयभित्र सिंगै जसपा र माधव नेपाल पक्षको समेत समर्थन जुटाउने कोशिस गर्ने निर्णय गरेको महतले जानकारी दिए । राष्ट्रपति भण्डारीले सोमबार नै नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूलाई संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार आउन तीन दिनको समय दिएकी छन् ।
कांग्रेसले आफू नेतृत्वमा सरकार बनाउन सबैभन्दा भरपर्दो वातावरण माओवादी केन्द्रबाट पाएको छ । सकेसम्म सिंगो जसपालाई पनि गठबन्धनमा ल्याउने कोशिस भइरहेको कांग्रेसले जनाएको छ । माधव–झलनाथ समूहसमेत फकाउने प्रयास जारी छ ।
‘विपक्षमा रहेका दलसँग छलफल हुन्छ, माओवादीले प्रस्ट भनिसकेको छ, जसपाको एउटा समूह पनि प्रस्ट छ,’ कांग्रेस सहमहामन्त्री महतले भने, ‘सिंगो जसपा कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने गठबन्धनमा आउँछ, विकल्पमा अर्को तरिका पनि छ ।’
बैठकमा सभापति देउवाले सरकारका लागि भइरहेको गठबन्धन प्रयास र छलफलबारे ‘ब्रिफिङ’ गरेका छन् । बैठकअघि उनले माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग छलफल गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत पाउन नसकेपछि उनी कामचलाउ सरकारको हैसियतमा छन् ।
देउवा–प्रचण्ड एक घण्टा छलफल
नयाँ राजनीतिक कोर्समा ‘कसरी अघि बढ्ने ?’ भन्नेबारे कांग्रेस सभापति देउवा र माओवादी केन्द्र प्रचण्डबीच १ घण्टा छलफल भएको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेपछिको राजनीतिक अवस्था विषयमा छलफल गर्न प्रचण्ड देउवा निवास बूढानीलकण्ठ पुगेका हुन् ।
छलफलक्रममा विपक्षी गठबन्धनका सबै दलबीच सरकार गठनबारे कुराकानी गर्ने सहमति भएको स्रोतले बतायो । माओवादी केन्द्रले भने कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न अग्रसरता देखाइसकेको छ । कांग्रेसले पनि आन्तरिक तयारी तीव्र पारेको छ । तर, जसपाको साथबिना सरकार बन्ने अवस्था देखिएको छैन ।
यही विषयमा दुई नेताबीच ‘रणनीति’ बनाएर अघि बढ्ने र यसका लागि सक्रिय हुने सहमति भएको छ । देउवाले जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई फोन गरी निरन्तर संवाद जारी राखेको बुझिएको छ ।
काठमाडौं । असार २९ गते पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता सम्हालेको आज ६६ दिन पुग्यो । सुरुमा ५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाएका...
दलका नेता राष्ट्रप्रमुख हुँदा कन्त बिजोग भयो : राणा
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबराले मुलकमा विद्यमान कन्त बिजोगको एक प्रमुख कारण दलीय प्रतिनिधि राष्ट्रप्रमुख रहने व्यवस्था भएकोले...
वार्षिक लक्ष्यको ५९.६९ प्रतिशत राजस्व असुली
एमाले एकता घोषणा आजै हुने !